Soo dejisan HitmanPro 3.8.18.312 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: HitmanPro
HitmanPro – utility casri ah si ay u ilaaliyaan nidaamka iyada oo la isticmaalayo technology daruurtii. software The waa awoodaa in la ogaado oo ka saar Bots, kolkaasaa dirxi galay, Trojans, rootkits, lagu daro viral, spyware iyo adware. HitmanPro ururiya xogta iyo ayaaba falanqaynta xogta habdhaqanka si ay u aqoonsadaan iyo saaro waxyaalaha laga shakiyo in marxalado kala duwan. HitmanPro isticmaalaa database-ka mid ah horumarinta software antivirus hoggaamineed oo ay ku kaydsan yihiin oo daruur ku kaydinta ee software-ka, si toos ah siinaya scan fog oo aad computer ka server shirkadda. HitmanPro taageertaa bandhigista iyo xaqiijinta nidaamka ka drives flash, CDs ama storages network ku lifaaqan.
Aqoonsiga hanjabaad kala duwan
Isticmaalka tiknolojiyada daruurtii
Falanqaynta software Dabeecadda
Abuurista isbaarooyinka hor xaqiijinta
Daahfurka ka kaydinta xogta
Soo dejisan HitmanPro
Faallo ku saabsan HitmanPro
HitmanPro Xirfadaha la xiriira